Randy Ortan Oo ka hadlay arimo badan oo ku saabsan soo laabashadiisa | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » WWE » Randy Ortan Oo ka hadlay arimo badan oo ku saabsan soo laabashadiisa
Randy Ortan Oo ka hadlay arimo badan oo ku saabsan soo laabashadiisa
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 10-05-16 12:42 PM Randy Orton ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan kusoo laabashadiisa shaashadaha WWE wuxuuna sheegay inuu Isbuucyada soo aadan kusoo laaban doono riingaha.
Orton ayaa muddo dheer dhaawac uga maqnaa riingaha, wuxuuna ka jawaabay dhowr su’aalood oo lagu weydiiyey bartiisa Twitter.
Orton, oo 12 jeer noqday horyaalka adduunka, ayaa tilmaamay inuu goordhow kusoo laaban doono shaashadaha WWE, wuxuuna tilmaamay in shirkaddu ay go’aan wanaagsan sameysay markii ay liiska legdanyahannadeeda kusoo darsatay AJ Styles.
Ugu dambeyntiina, Orton wuxuu sheegay inuu ka xun yahay inay shirkadda WWE shaqada ka raacdeysay saaxiibkiis Cody Rhodes. Halkaan hoose ayaan kusoo qaadanay su’aalihii ugu fiicnaa ee uu ka jawaabay.